Tinonzwisisa nguva hunhu Israeri? | Apg29
Tinonzwisisa nguva hunhu Israeri?
Israeri vakadzorerwa sorudzi uye vaJudha vakaungana kunyika.
Zvino hatichafaniri kumirira vaJudha vachadzokera kunyika yavo, yakava chokwadi kwemakore 70 apfuura.
Tinonzwisisa kuti izvi zvinorevei?
Kana tisina kunzwisisa ichi, zvinoreva kuti isu kucharambwa mukunzwisisa shoko rouprofita. It zvinganzwika zvinoshamisa, asi unogona chaizvoizvo kuitwa nenzira iyi.
Saka pano isu kunorevei. It zvino zvakaitika okupedzisira 70 makore akaprofita zvakajeka kuti vaya vanoverenga uprofita yemubhaibheri pachine vakaziva kuti izvi zvaizoitika.
Pano ticharamba chete kupa mienzaniso vaparidzi vechiKristu panguva nguva akaona shoko rouprofita.
Munguva 1600s, akararama John Owens, uyo aiva Chirungu mutungamiri chechi uye yezvechitendero. Paiva panguva iyoyo kwete Kutsvuka tariro kuti vaJudha vaigona kudzokera kunyika yavo. Pasinei ichi vakafanotaura John Owens anotevera:
"VaJudha anofanira vakaungana kubva kumativi ose enyika mavakanga vakaparadzirwa, uye vakadzoka kumusha kwavo."
MaProtestenti munyori Paul Glegenhauver akanyora izvi 1655: "A zvachose kwevaJudha kunyika yavo Nokusingaperi basa naMwari kuburikidza inopiwa zvipikirwa kuna Abrahamu, Isaka naJakobho."
Isu kutora mienzaniso kubva kumativi zana nemakore. August Hedstrom akapa muna 1912 akabudisa rake rinonzi Studies in uprofita.
Mairi akanyora: "Pakupedzisira, cherechedza kuti UTi Turkish Empire achaita panguva iyoyo ive yakazvimirira vakasununguka mamiriro, kureva vaJudha State, kana chii ichanzi."
The Danish mushumiri C. Skovgaard-Petersen akanyora bhuku Zviratidzo uye nguva, rakabudiswa 1919th
Mubhuku rino munyori anopa mashoko Jesu asati anodzoka, saka vaJudha vachava shure munyika yake. Akanyora izvi:
"Asi pane kuzvidzosera zvinofanira kukurukurwa sezvo chokwadi Biblical, kuti vaIsiraeri vakaungana munyika dzavo uye vari vårbrytning yomudzimu Jehovha asati auya. Vatambi hadzina azadziswa, vaJudha havasati asvika nhaka Palestine. "
Uyezve akanyora Skovgaard-Petersen: "Saka tinogona kutarisira kuti vaJudha vanofanira kuva pamberi kudzoka kwaJesu Kristu uye kudzokera kunyika yake."
Chii zvino Zvisinei kuuya pedyo ndechokuti Jesu chero nguva unogona kudzoka, nokuti dzinokosha ouprofita mamiriro ezvinhu ichi hwakazadziswa. Tinoonei ichi uye tora zvakaipira payo?
Vecka 9, söndag 7 mars 2021 kl. 06:57